Mukurumbira Informant - Mbiri Informant inosanganisira akasiyana maficha anoongorora yako email mukurumbira. Chimwe chezvinhu zvinozivikanwa kwazvo zve 250ok Mhinduro ndeyavo spam musungo netiweki angangoita makumi matatu emamiriyoni domains. Kuwanika kune iyi data hakuna-brainer kune vatengesi veemail. Kukura uye mhando yeiyo spam musungo network, uye granular kupinda kune iyo chaiyo-nguva dhata (semuenzaniso, musungo unorova nezuva, IP, duraini, wenyaya mutsara, nyika), inokwezva zvakanyanya kwandiri semutumi. Iko kusarongeka kuongorora? Iyi data inowanikwa mune chaiyo-nguva, uye iwe unogona kuseta zvakagadziriswa zviyeuchidzo kuti utarise pane zvinyorwa zvinokunetsa iwe zvakanyanya. Ini ndinoda kusanduka mukugadzirisa kuti ndiani anowana yambiro uye kuti yambiro yacho inopihwa sei (semuenzaniso, email, SMS).
Inbox Informant - Vashambadziri vanoda zvigadzirwa zvemazuva ano zvekuvabatsira kumhara mubhokisi rezvinyorwa. Inbox Informant inokuratidza kuti yakawanda sei tsamba yako yakaiswa muinbox, spam, uye kuti yakawanda sei yakashaikwa. Iwe unogona kutyora yakatarwa email kuendesa nyaya nemushandirapamwe, izvo zvinobatsira kwazvo. Imwe yemakakatanwa akakosha andakaona pakati 250ok uye Return Path ndeye 250ok's seedlist chinopihwa. Usati wabatwa mukuenzanisa kufukidza, iyo chete mbeu yakakosha ndeye kune vanopa mabhokisi ema mail kwaunotumira tsamba. Nguva. 250ok yakavaka seedlist optimizer chishandiso kukubatsira iwe laser mukati pane maSevhisi izvo zvine basa. Pakazara, pane misiyano mishoma mune yekudyarwa kwembeu nemakambani ese ari maviri ane imwe mbeu yakasarudzika, asi pane parody yayo kune angangoita ese makuru ekugamuchira. Makambani maviri aya anogona kunge aine zvaunoda kana achazviwana.
Email Informant - Munyika inotungamirwa nedata, yakavhurika uye maCTR haataure nyaya izere. Kuburitsa 250ok yekutevera pixel ine Email Informant inokuudza kuti ndevapi vanyoreri vanoverenga meseji uye kwenguva yakareba sei, uye rudzii rwechigadzirwa uye nehurongwa hwekushandisa hwavaishandisa. Ndeapi ma link kana maCTA akaita zvakanakisa? Uri kugadzirisa nguva dzekutumira here? Email Informant inobatsira iwe kuti unzwisise zviri kushanda uye zvisiri izvo kuti iwe ugone kuita nekungwara, nekukurumidza sarudzo.
Dhizaina Informant - Wese mutengesi weemail anoda kuita imwe pre-ndege kuongororwa kutenderera dhizaini, saka 250ok ine kunze-kwe-kwe-bhokisi kusangana pamwe nekutungamira kunopa vatengesi Email pane Acid uye Litmus. Dhizaini Informant inoedza yako yekugadzira maringe neakajairwa spam mafirita anosanganisira Barracuda, Symantec, Spam Assassin, Outlook, uye zvimwe zvakawanda kuti ugone kuona nekugadzirisa zvinokanganisa spam usati waendesa mushandirapamwe wako.
Tags: AndroidAndroid 2.3Android 2.3 email yekutarisaAndroid 2.3 email yekutarisa bvunzoAndroid 4.2Android 4.2 email yekutarisaAndroid 4.2 email yekutarisa bvunzoAndroid email yekutarisaAndroid email yekutarisa bvunzoAOL MailAOL tsamba ChromeAOL kutumira tsamba Chrome emailAOL mail Chrome email yekutarisa bvunzoAOL Mail email yekutarisaAOL Mail email yekutarisa bvunzoAOL Mail Internet ExplorerAOL Mail Internet Explorer email yekutarisaAOL Mail Internet Explorer email yekutarisa bvunzoApple Tsamba 6Apple Mail 6 yekutarisa emailApple Mail 6 email yekutarisa bvunzoBlackBerry 4 OSBlackBerry 4 OS email yekutarisaBlackBerry 4 OS email yekutarisa bvunzoBlackBerry 5 OSBlackBerry 5 OS email yekutarisaBlackBerry 5 OS email yekutarisa bvunzoblacklist informantRuvara HupofuRuvara Blindness email yekutarisaRuvara Blindness email yekutarisa bvunzokuburitswaDMARCemail ichivhariraemail kuburitswaemail design designemail inozivisaemail paneli dataemail mukurumbiraGmailGmail AppOngororo yeemail yeApple yeGmailGmail App email yekuongorora bvunzoGmail ChromeKuongorora kweGmail Chrome emailGmail Chrome email yekutarisa bvunzoGmail FirefoxOngorora email yeFirefox yeemailGmail Firefox email yekuongorora bvunzoGmail Internet ExplorerKutarisa email yeGoogle Internet ExplorerGmail Internet Explorer email yekuongorora bvunzogreg kraioskuongorora kweinboxinbox inozivisainbox kuiswaiPadiPad email yekutarisaiPad email yekutarisa bvunzoipad miniiPad Mini email yekutarisaiPad Mini email yekutarisa bvunzoiPad RetinaiPad Retina email yekutarisaiPad Retina email yekutarisa bvunzoiPhone 4siPhone 4s email yekutarisaiPhone 4s email yekutarisa bvunzoiPhone 5iPhone 5 email yekutarisaiPhone 5 email yekutarisa bvunzoiPhone 5siPhone 5s email yekutarisaiPhone 5s email yekutarisa bvunzoiPhone 6iPhone 6 email yekutarisaiPhone 6 email yekutarisa bvunzoiPhone 6 PlusiPhone 6 Plus email yekutarisaiPhone 6 Plus email yekutarisa bvunzoisp kuturikaisp email kuedzwalitmusLotus manotsi 6.5Lotus Notes 6.5 email yekutarisaLotus manotsi 6.5 email yekutarisa bvunzoLotus manotsi 7Lotus Notes 7 email yekutarisaLotus manotsi 7 email yekutarisa bvunzoLotus manotsi 8Lotus Notes 8 email yekutarisaLotus manotsi 8 email yekutarisa bvunzoLotus manotsi 8.5Lotus Notes 8.5 email yekutarisaLotus manotsi 8.5 email yekutarisa bvunzoMAC OS XMAC OS X email yekutarisaMAC OS X email yekutarisa bvunzoMICROSOFT MAHwindoMICROSOFT WINDOWS email yekutarisaMICROSOFT WINDOWS email yekutarisa bvunzoOutlook 2000Outlook 2000 email yekutarisaOutlook 2000 email yekutarisa bvunzoOutlook 2002Outlook 2002 email yekutarisaOutlook 2002 email yekutarisa bvunzoOutlook 2003Outlook 2003 email yekutarisaOutlook 2003 email yekutarisa bvunzoOutlook 2007Outlook 2007 email yekutarisaOutlook 2007 email yekutarisa bvunzoOutlook 2010Outlook 2010 email yekutarisaOutlook 2010 email yekutarisa bvunzoOutlook 2011Outlook 2011 email yekutarisaOutlook 2011 email yekutarisa bvunzoOutlook 2013Outlook 2013 email yekutarisaOutlook 2013 email yekutarisa bvunzoOutlook.com (Firefox)Outlook.com (Firefox) yekutarisa emailOutlook.com (Firefox) email yekutarisa bvunzoOutlook.com ChromeOutlook.com Chrome yekutarisa emailOutlook.com Chrome email yekutarisa bvunzoOutlook.com Internet ExplorerOutlook.com Internet Explorer email yekutarisaOutlook.com Internet Explorer email yekutarisa bvunzoRugwaro RakajekaPlain Chinyorwa email previewPlain Chinyorwa email yekutarisa bvunzomukurumbira informantdzoka nziradzoka nzira imwedzoka nzira chitupaspam musungospam musungo networkzvinokonzera spamThunderbird ichangoburwa WEB-BASEDThunderbird yazvino WEB-BASED email yekutarisaThunderbird yazvino WEB-BASED email preview bvunzoWindows Phone 8Windows Foni 8 email yekutarisaWindows Foni 8 email yekutarisa bvunzoYahoo! Tumira ChromeYahoo! Tumira tsamba yeemail ChromeYahoo! Tumira tsamba yeemail Chrome yekutarisaYahoo! Tumira FirefoxYahoo! Tumira tsamba yekutumira email yeFirefoxYahoo! Tumira tsamba yekutarisa email yeFirefoxYahoo! Tumira Internet Internet ExplorerYahoo! Tumira email Internet Explorer email kuongororaYahoo! Tumira email Internet Explorer email yekutarisa bvunzo
Huru nyowani nyowani yekushambadzira maemail zvishandiso, ndinofunga vanhu vachazoshamiswa neemail kana vachinge vawana mukana kune data riri nani.
Yakakomba data musayendisiti
Aug 16, 2016 na10: 47 PM
Zvakanaka izvo zvakangouraya huchokwadi hweichi chinyorwa "250ok vatsigiri vesaiti yedu uye ini ndiri shamwari yakanaka yemuvambi Greg Kraios"
Ehe, ndiri shamwari naGreg uyo aive neichi chiratidzo pamusoro pemakore gumi apfuura uye ikozvino anokwikwidza nekambani hofori ine matani ezvekushambadzira zviwanikwa. Ini ndinodada nekubatsira kuparadzira izwi pamhinduro yake inoshamisa. Uye ndinotenda zvakare nevatsigiri vedu vanotsigira ino saiti uye vanondibatsira kupa rumwe ruzivo kuvadzidzi vedu. Kuzivisa kuri pachena uye kunofanirwa kuombererwa, kwete kusekwa nemunhu asingazivikanwe anopindura anotya kupa zita chairo kana email chaiyo kero.
Chero vamwe vatengi veCert pano vanoona vachivharira kuRwendo Rwevamwe? Uye nekuda kwekujeka, Douglas! Rangarira, hapana chiito chakanaka chinoenda chisina kurangwa. 😉
Douglas, maita basa nechinyorwa ichi; Ini ndinobvuma zvakakosha kuti uzive nezvesarudzo dzako kana uchisarudza wekuendesa naye. Ndine hanya, zvisinei, kuti iwe hauna kukwanisa kupa chinzvimbo chisina rusaruro mukuenzanisa kwako sezvo uine hunyanzvi uye hukama hwehukama ne250ok, sezvakataurwa mukuzivisa kwako. Ini zvakare ndaona mibvunzo yakati wandei mukati mewongororo yako Yekudzoka Nzira, uye ndakasuwa iwe hauna kusvika kwatiri kuti tibatsire kuzadza izvo zvipenga. Semaneja wekushambadzira chigadzirwa cheedu Email Optimization mhinduro, ndingadai ndaka - uye ndichiri - ndinofara kukubatsira kupindura iyo mibvunzo.
Kuti upindure mumwe wemibvunzo yako - hongu, nhengo dzeVatengi veNetwork mapaneru vakanyatso kupa mvumo yekuDzorera Nzira kuti vawane yavo yekushandisa mailbox uye data rekuita. Ndiri kufara kupa rumwe ruzivo pane izvi kana uchida.
PaKudzoka Path, isu tinodada zvakanyanya neyakaenzanirana dhata yatinayo yekugadzirisa mhinduro uye maonero idata iri rinopa vatengi vedu. Isu tinoziva kuti ruzivo rwunotungamirwa nedata rwakakosha kuemail kushambadzira chirongwa kubudirira, uye zvakakosha kuti vashambadziri vari kuita sarudzo zvichienderana nedata kubva kune avo chaivo vanyori. Tine chivimbo mukutaura kuti vatengesi veemail avo vanonyatsoda kukura chirongwa chavo cheemail uye voona yakagadziriswa ROI kubva kuemail vanozobatsirikana nekubatana neKudzoka Nzira Sezvawataura, isu tine data, hukama hweindasitiri, uye ruzivo rweemail ruzivo runogona kubatsira vashambadzi kuwedzera mari yavo kubva kuemail nekuwedzera kwavo email kusvika, kuvaka hukama hwevanyoreri zvirinani, uye kugadzirisa maemail avo ekuvandudza kuita.
Kutenda nekutora nguva yekuwana ruoko. Pasina mubvunzo upamhi, kusvika, uye nzira iyo Return Path yakapisa muindasitiri yekuendesa. Kutenda nekujekesa iyo data yekuwana nyaya futi.
Makwikwi anogara akanaka, uye nekushandisa zana re250okok redu reESP yedu, takanyatso kufadzwa nezvakabuda. Saka apo ini ndiri shamwari uye ivo vari ivo vanotsigira, isu tiri zvakare mutengi uye mushandisi wepuratifomu yavo. Iyo papuratifomu mhinduro haina kusarura zvachose - ini handingamboita kurudziro yepuratifomu yandisina kushandisa ruoko rwekutanga
Zvita 5, 2016 na12: 02 PM
Seye nyanzvi yekugadzirisa zvinhu muFrance, ndinoshamisika kuti iwe unokurudzira RP kuvandudza kuwedzera mashandiro paOrange. Orange haishandise RP Certification.
Zvita 18, 2017 na2: 05 PM
Ndiri kuda kuziva nezve kuenzanisa kwemitengo futi. Ini parizvino ndinoshandisa 250ok izvozvi, asi ndiri kuzeza kupinda muchiitiko chedemo ndisingazive chiyero chemutengo pakati pe250ok uye nzira yekudzoka